UMphathiswa Wezokhenketho Udibana noMbutho woKwamkelwa kweNdwendwe kunye nezoKhenketho eSeychelles
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » UMphathiswa Wezokhenketho Udibana noMbutho woKwamkelwa kweNdwendwe kunye nezoKhenketho eSeychelles
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
I-Seychelles Hospitality kunye noMbutho wezoKhenketho
UMphathiswa Wezangaphandle nezoKhenketho, uSylvestre Radegonde, kunye no-Nobhala oyiNtloko wezoKhenketho, UNkosazana Sherin Francis, badibene nebhodi yase-Seychelles Hospitality and Tourism Association (SHTA) ukuxoxa ngemiba ekhoyo echaphazela ukubuyiswa kokhenketho eSeychelles, eqinisekisa. urhwebo lokuzinikela kukarhulumente kwimpumelelo yeshishini ngokunjalo neenzame zikarhulumente eziqhubekayo zokusebenzisana namashishini abucala.
I-SHTA ifumene inkxaso kuMphathiswa Wezangaphandle nezoKhenketho kumdla wecandelo kunye noluntu ngokubanzi.
Iintlanganiso zanyanga zonke phakathi kwala masebe mabini ziya kuqhubeka.
Iingcali kwezokhenketho ezivela kwicandelo labucala ziya kucelwa ukuba zijoyine ikomiti entsha yeengcebiso ukunceda ngokufanelekileyo urhulumente ekusombululeni imiba enxulumene nokhenketho.
Umphathiswa u-Radegonde uxele ekuqaleni kwentlanganiso, ebibanjelwe okokuqala kulo nyaka, ngokuqinisekileyo, ngokusebenzisa iqonga le-intanethi i-ZOOM ngasekupheleni kwenyanga ephelileyo, ukuba isebe lakhe, ngesizathu, liza kuxhasa izicelo ezenziwe yi-SHTA ngenjongo yecandelo kunye Uqoqosho olubanzi. Intsebenziswano kunye nokubonisana kuyakwandiswa watsho, ngokuqala kwakhona kweentlanganiso zenyanga phakathi kweSebe lezoKhenketho kunye neSHTA.
Esenza isishwankathelo samalungu ebhodi ye-SHTA malunga nohlengahlengiso olwenzeka kwiSebe lezoKhenketho, uMphathiswa uRadegonde wathi ukupheliswa komthetho Ukhenketho lwaseSeychelles IBhodi (i-STB) nokudityaniswa kwamaqumrhu ezokhenketho kazwelonke amabini abalulekile ekumanyaniseni izibonelelo zawo omabini amaziko ngelixa kusenziwa unxibelelwano olunqwenelekayo phakathi kwala mabini.
Isindululo sika-Mphathiswa uRadegonde sokumema iingcali kwezokhenketho ezivela kwicandelo labucala ukuba zijoyine ikomiti entsha yokucebisa ukunceda urhulumente ekusombululeni imiba enxulumene nokhenketho samkelwa kakuhle yi-SHTA eyathi yaqinisekisa ukuba ishishini lokhenketho liyomelezwa xa amacandelo abucala naworhulumente esebenzisana kwaye esenza igalelo ngokudibeneyo ukucwangcisa nokucinga ngobuchule kunye nezisombululo kwiingxaki zelizwe.
Ixabiso lemali ngumba ophambili ojamelene nolu shishino kwaye uMphathiswa uRadegonde wasiphinda isicwangciso sesebe sokuphucula amava eendwendwe; Uvavanyo kunye nokudweliswa kweendawo esele zikhona zomdla kunye neemveliso zokuhlala ziya kuqhutywa kunye nemirhumo yokungena kwiindawo ezinomtsalane ziqwalaselwe ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zifumana ixabiso lemali.